"Kuravira kweSeychelles" inopemberera kusangana kwepamutemo nevabatsiri veUAE
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » "Kuravira kweSeychelles" inopemberera kusangana kwepamutemo nevabatsiri veUAE
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau
Pachiitiko chekutanga kusangana kwepamutemo kwaVaSylvestre Radegonde, Gurukota reSeychelles Rezvekune dzimwe nyika nekushanya, nevadyidzani vekuMiddle East vekushanya, Hofisi yeTourism Seychelles yakaitisa chiitiko che "Taste of Seychelles" kuJumeirah Emirates Towers manheru eChipiri. , Gumiguru 26.
Chiitiko ichi chaisanganisira vanhu vane simba uye vanotungamira mabhizinesi manhamba kubva kuUAE, pamwe nevezvenhau vezvenhau uye moguls, uye vanodyidzana navo.
Vaenzi vakatorwa parwendo rwunonaka nezvinonaka zvakaita secoconut nougat, mabhanana machipisi uye zvinwiwa zvemuno.
Sezvo zvirambidzo zvekufamba zvinotanga kurerutswa munyika yese yeArab, vanhu vazhinji vanokwanisa kuzvionera vega hupfumi hwetsika hweSeychelles.
Padivi peGurukota rezvekunze nekushanya, vamwe vamiriri vehurumende vakasiyana kubva kuSeychelles vakapinda chiitiko ichi. Gurukota reVechidiki, Mitambo nemhuri, Marie-Celine Zialor; Mutungamiriri Akasarudzwa uye Gurukota rezveHove, Jean François Ferrari; Meya weVictoria, David Andre; nevamwe vakuru vakuru vehurumende vane mukurumbira kubva iyo Seychelles vakabatana naGurukota Radegonde mukuchingamidza vaenzi, avo vaisanganisira vanhu vakawanda vane mukurumbira uye vane mukurumbira mune zvebhizimisi kubva kuUnited Arab Emirates, pamwe nevezvenhau vakasiyana-siyana, vezvenhau, uye vanodyidzana navo mukutengeserana, kuchiitiko ichi chinopenya.
Gurukota rakaperekedzwawo pabasa iri neMunyori Mukuru weKushanyirwa kwenyika, Sherin Francis, uye Director General weDestination Marketing, Bernadette Willemin, vese vari vaviri vaivepo kuzotambira vaenzi.
Muhusiku hwese hunofadza uye hwakaoma, hwakaitika pamberi peSeychelles 'National Day kuExpo 2020 Dubai, vashanyi vakatorwa parwendo rwekuwanikwa kwekunhuhwirira kweSeychelles, uko kwaipihwa zvinonaka zvakaita secoconut nougat, mabhanana machipisi uye zvinwiwa zvemuno. ivo vakanakidzwa nemuimbi weSeychellois Isham Rath uye mutambi weSaxophone Jean Quatre, vaviri veSeychellois vane mukurumbira maartist.
Mukutaura kwavo, Minister Radegonde vakati: “Sezvo aka kari rwendo rwangu rwekutanga kuMiddle East ndiri gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, ndinoda kutenda vanhu vekuUnited Arab Emirates nemutsa wavo unoshamisa. Hukama hwedu neUnited Arab Emirates hwagara huri hwepedyo uye hunokosha. Kubva hukama hwedu mudunhu hwakatanga makore angangosvika makumi maviri apfuura, UAE yanga iri nyika yekutanga yekuMiddle East inoshanyira zvitsuwa zvedu kwemakore gumi akateedzana. "
Vachitaura nezvemigumisiro yedenda pazvitsuwa izvi, VaRadegonde vakati: “Tave tichishingaira zvikuru mukutora matanho akakodzera mukuita zvinodiwa pakufamba kuitira kuti tidzivirire vagari vedu nevashanyi. Tinoonga kuti kushanda kwedu nesimba kwakabhadhara. Parizvino, inosvika 72% yevagari vedu vakabayiwa zvizere. Kuburikidza neizvi, isu tinogona ikozvino kuzivisa zviri pamutemo Seychelles senyika yakachengeteka kune vashanyi. "
Vachitaura nezvechiitiko ichi, Ahmed Fathallah, Tourism Seychelles mumiririri anogara kuDubai, akati: “Tinofara zvechokwadi nekuuya kwechiitiko ichi. Tinoda kutenda vaenzi vedu vanoremekedzwa nekuita kuti vave pano nhasi uye nekupa kutambira nemufaro mukuru kuna Minister Radegonde pakushanya kwavo kwekutanga zviri pamutemo segurukota rezvekushanyirwa kwenyika kuMiddle East. Sezvo zvirambidzo zvekufamba zvatanga kurerukirwa munyika dzese dzechiArab, tinovimba kuti vanhu vakawanda vanokwanisa kuzvionera vega mativi mazhinji uye netsika dzakapfuma dzeSeychelles. "
An avant-goût yeSeychelles chiitiko inowanikwa kune avo vanoshanyira nzvimbo yechitsuwa-nyika paEXPO 2020, Mai Francis vakati, "Kune avo vanofarira kuona yavo vega 'Taste of Seychelles' muno muDubai, tiri. ndinofara kuvazivisa kuti vanokwanisa kuzviita zvakanaka paSeychelles pavilion iri muEXPO. "
Pasi pezwi rinoti 'Kuchengetedza Zvisikwa,' Seychelles iri kushandisa puratifomu yavo yakakwira muEXPO 2020 Dubai kuratidza kuedza kwakaitwa nevese veko nevekunze masangano kuchengetedza hupfumi hweSeychelles kuburikidza nekuchengetedza zvisikwa zvechisikigo uye kusiyana-siyana kwezvitsuwa zvakanaka.
“Wakanga uri mufaro wakakwana kutora muenzi wedu weUAE parwendo urwu rwakanaka kuenda kunoravira zvitsuwa zvedu. Yakanga iri nguva yakafanira kuti timu yeTourism Seychelles ibatane nevatinoshanda navo mumaindasitiri, "akadaro Bernadette Willemin.
Iine vashanyi zviuru gumi nezvisere vakarekodhwa kubva kuUAE kubva muna Ndira 18,000, nyika ndiyo yechipiri yepamusoro sosi musika weSeychelles.